တရုတ်ရေနံ Humidifier, ဟိုတယ် Humidifier, ROOM တွင် Humidifier ပေးသွင်း
Shenzhen Dituo Electronic Co.,Ltd. [Guangdong,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer အဓိကစျေးကွက်များ: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide ထုတ်ကုန်:61% - 70% Cert:ISO9001, CE, EMC, FCC, MSDS, REACH, RoHS, Test Report ဖေါ်ပြချက်:ရေနံ Humidifier,ဟိုတယ် Humidifier,ROOM တွင် Humidifier,မြေတပြင်လုံးအိမ် Humidifier,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > ဟိုတယ် Humidifier
ဟိုတယ် Humidifier ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, ရေနံ Humidifier, ဟိုတယ် Humidifier ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, ROOM တွင် Humidifier R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
Led အလင်းအသံတိတ်အဖုံးနှင့်အတူ Cool Mist စိုထိုင်းဆ
Square High Capacity လေသန့်စက်နှင့် Humidifier
DC 5V Air Innovations Cool Mist Air Humidifier Cool
Ball Shape 200ml အသေးစားဖန်အနံ့ဆိုး
Walmart Led အလင်းရေမွှေးပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်စိုထိုင်းဆ
အရည်အသွေးမြင့်အလှဆင် Cool Mist Aroma Air Humidifier
ကလေးငယ်အတွက်ပစ်မှတ်ရနံ့ကုထုံး Cool Mist Humidifier
ကူဝိတ်ပါကစ္စတန်နယူးဇီလန်အတွက် Ultrasonic Aroma Diffuser
အဘယ်သူမျှမယိုစိမ့်ချစ်စရာစျေးပေါတဲ့မရှိမဖြစ်ရေနံ Air ကို Humidifier
ပူနွေးသောအလင်းနှင့်အတူမြူခိုး Humidifier ရနံ့ကုထုံရေနံ Cool
အဘယ်သူမျှမဆူညံသံအနံ့မရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့ Air ကို Humidifier
glaze Glass ကိုအနံ့မရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့ပြီးတော့ Humidifier
5 နာရီကို run အကြီးစားချစ်စရာရနံ့ရေနံပျံ့
ရနံ့အမွှေးအကြိုင်ပျံ့ခုနှစ်တွင်လျှပ်စစ် Mini ကို Plug
Led အလင်းအသံတိတ်အဖုံးနှင့်အတူ Cool Mist စိုထိုင်းဆ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများနှင့်အတူမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့: ထိပ်တန်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများနှင့်အတူ DITUO ဗားရှင်းအသစ်ကမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေပျံ့။ ဒုတိယမျိုးဆက် - ဒုတိယမြောက် ultrasonic ပျံ့နှံ့မှုသည်ယခင်ဗားရှင်းထက်အဆိပ်ပိုမိုထုတ်လုပ်သည်။ အခန်းငယ်များ၊...
ဟိုတယ်အခန်းအတွက်ပူနွေးသောအိတ်ဆောင်ခရီးသွားလာခြင်းစိုထိုင်းဆ7LED အရောင်များ စိုထိုင်းဆကိုစိုစွတ်သောနေရာများသို့ဖြန့်ဝေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းကိုမည်သည့်ထွက်ပေါက်တွင်မဆိုတပ်ဆင်။ ဤတိုးတိုး - တိတ်ဆိတ်သောစိုထိုင်းဆသည်သင်၏ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုစိုစွတ်စေသောစိုထိုင်းဆကိုတိုးစေသည်။ Aromatherapy Humidifier...
Square High Capacity လေသန့်စက်နှင့် Humidifier ဤသစ်သားစပါးပျံ့နှံ့မှုသည် Aromatherapy အတွက်သင်အကြိုက်ဆုံးမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများကိုပျံ့နှံ့စေနိုင်ပြီးနာရီပေါင်း ၂၀ အထိသင့်အခန်းကိုစိုစွတ်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်သည်။ ၁၊ ၃၊ ၆ နာရီသို့မဟုတ်စဉ်ဆက်မပြတ်အတွက် timer ခလုတ်ကိုသတ်မှတ်ပါ။...
DC 5V Air Innovations Cool Mist Air Humidifier Cool ထူးခြားပြီးကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောဒီဇိုင်း - သေးငယ်သောဒီဇိုင်းသည် humidifier ပျံ့နှံ့မှုကိုအဆင့်မြင့်အောင်ပြုလုပ်ထားပြီးလှပသောပုံသဏ္,ာန်ဖြစ်သည်။ သင့်အိမ်၊ ရုံးခန်း၊ ဟိုတယ်များအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ ထို့အပြင် usb interface သည်သင့်အားအပန်းဖြေချိန်၌ဤ multi-functional...
Target Glass Mini Personal Air Purifier Humidifier [ထူးခြားသော Glass Cap Design] ဖန်သားဒီဇိုင်းသည်လှပသောမျက်နှာပြင်ကိုဖန်တီးပေးပြီးမည်သည့်ဒီဇိုင်းနှင့်မဆိုကိုက်ညီသည်။ အိမ်၊ ရေချိုးခန်း၊ အိပ်ခန်း၊ living ည့်ခန်း၊ ရုံးခန်း၊ [၇ အရောင် LED မီး] အလင်းတွင်အရောင် ၇ မျိုးရှိသည်။...
အကြီးစားစွမ်းဆောင်ရည် Ultrasonic Humidifier မြူခိုး Cool Ultrasonic ပျံ့ခေတ်မီ ultrasonic နည်းပညာမွေးစား, ဒီမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့သင်အိပ်တဲ့အခါသင်မနှောက်ယှက်ပါလိမ့်မည်နှောင့်အယှက်ဆူညံသံမပါဘဲသို့မဟုတ်အလုပ်မှာအလွန်တိတ်ဆိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကမပိုရေသို့မဟုတ်ရေထွက်ပြေး,...
ဟိုတယ်အခန်းရှိပူနွေးသောအလင်းစေးစိုထိုင်းဆ Humidifier 【အိတ်ဆောင် AROMA DIFFUSER 】: ဒီမွှေးကြိုင်ဆီဖြန့်သည်သေးငယ်ပြီးသယ်ဆောင်ရန်လွယ်ကူသည်။ အခန်း၊ ရုံးခန်းသို့မဟုတ်ထောင့်တွင်နေရာချထားနိုင်သည်။ ပြီးတော့ ၁၀၀ မီလီမီတာပမာဏက ၅ နာရီအလုပ်လုပ်နိုင်တယ်။ 【 SUPER QUIET DESIGN Our...
Ball Shape 200ml အသေးစားဖန်အနံ့ဆိုး အိမ်၊ ရုံး၊ လေ့လာမှု၊ တွေးတောဆင်ခြင်နိုင်မှုနှင့်ရောင်ပြန်ဟပ်မှုနေရာ၊ အနှိပ်၊ ယောဂစတူဒီယို၊ မီးဖိုချောင်၊ အိပ်ခန်း၊ ရေချိုးခန်း၊ ကားဂိုဒေါင်၊ အင်္ဂါရပ်များ: •တိုးတိုးလေး - အသံတိတ်၊ လေပြင်းတိုက်ခိုက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသူ - သင်အကြိုက်ဆုံးမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီရောစပ်မှုကိုညင်သာစွာဖယ်ပေးသည်။...
Walmart Led အလင်းရေမွှေးပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်စိုထိုင်းဆ သင်နှင့်သင်၏မိသားစုအသက်ရှူသောဤ LED Aroma Oil Diffuser & Ultrasonic Humidifier ဖြင့်လေကိုသန့်စင်ပါ။ အိမ်တွင်းမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုနေရာချထားရန်သင့်တော်သော်လည်းအိပ်ခန်းအတွက်သင့်တော်သည်။ ဤရိုးရှင်းသောဟိုတယ် humidifier ကို LED အလင်းရောင်ဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားသောအရောင် ၇...
အရည်အသွေးမြင့်အလှဆင် Cool Mist Aroma Air Humidifier Air humidifier သည်သင်နှင့်သင်ချစ်ရသူများအတွက်ပိုမိုကျန်းမာသောပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကိုဖန်တီးပေးသည်။ သက်သာစေသည့်ဓာတ်မတည့်ခြင်းနှင့်အအေးမိရောဂါလက္ခဏာများကိုသက်သာပျောက်ကင်း စေပြီးသင်၏အသားအရေနှင့်သစ်သားပရိဘောဂများကိုပင် ကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းရန်လေထုကိုစိုစွတ်စေ ပါသည်။ Aroma...
ကလေးငယ်အတွက်ပစ်မှတ်ရနံ့ကုထုံး Cool Mist Humidifier တိုးမြှင့်ထားသော 200ml Capacity: ပိုကြီးမားသောရေလှောင်ကန်နှင့်အတူကျစ်လျစ်ပြီးအကောင်းဆုံးဒီဇိုင်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဤဖန်ပြန့်ပျံ့သည်ကြာရှည်စွာအလုပ်လုပ်ရသောအချိန်ကိုသေချာစေသည်။ Whisper Quiet: DITUO အလွန်အေးအေးဆေးဆေးချောမွတ်သောအအေးခံပျံ့နှံ့မှုဖြင့်အိပ်စက်အနားယူပါ။...
ကူဝိတ်ပါကစ္စတန်နယူးဇီလန်အတွက် Ultrasonic Aroma Diffuser [ဘက်စုံသုံးမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့] ရနံ့ကုထုံးမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီပျံ့နှံ့ခြင်း၊ ဒါ့အပြင်လှပသောအခန်းအလှဆင်။ ဘက်စုံသုံး - အသားအရေကိုစိုစွတ်စေခြင်း၊ လေကိုစိုစေခြင်း၊ ကိုယ်ခံစွမ်းအားကိုမြှင့်တင်ခြင်း၊...
220ml စျေးပေါစျေးနှုန်းအကောင်းဆုံးအိမ်တွင်းရနံ့ကုထုံးစိုထိုင်းဆ အအေးခံအစိုဓာတ်ငွေ့ - မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများ၏ကျန်းမာသောဂုဏ်သတ္တိများကိုထိန်းသိမ်းခြင်း။ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီအမြင့်ဆုံးပမာဏသည် ၂၂၂ မီလီမီတာဖြစ်သည် TIMER - built-in "ON / 3H / 6H" timer နေရာတွင်အထူးပြုလုပ်ထားသော ultrasonic humidifier,...
စတိုးဆိုင်ထဲမှာပစ်မှတ်ရောင်စုံဖန်စိုထိုင်းဆ Filter [အဆင့်မြင့်နည်းပညာ] ကျွန်ုပ်တို့သည်လေထုကိုပိုမိုသန့်ရှင်းစေရန်နှင့်အမွှေးအကြိုင်ကိုပိုမိုကျယ်ပြန့်သောtoရိယာသို့ပျံ့နှံ့စေရန်အတွက်လေမှုတ်ခြင်းအတွက် ultrasonic နည်းပညာကိုအသုံးပြုသည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင်၊ ultrasonic ပျံ့နှံ့မှုသည်ဆူညံသံကိုမဖြစ်စေပါ။...
ထုပ်ပိုး: အတွင်းစိတ်သေတ္တာ: * 170 170 * 128mm; မာစတာစက္ဏူထူ: 525 * 355 * 276mm / 12pcs
အဘယ်သူမျှမယိုစိမ့်ချစ်စရာစျေးပေါတဲ့မရှိမဖြစ်ရေနံ Air ကို Humidifier ခိုင်ခံ့အားလုံးညခိုးအငွေ့: 300ml ၏ကြီးမားသောစွမ်းရည်နှင့်အတူ, ultrasonic ပျံ့ပိုပြီးမြင်နိုင်ခိုးအငွေ့မသွားအောင်နှင့် ပတ်သက်. 8 နာရီများအတွက်နောက်ဆုံးမှတစ်ဦးအေးမြခိုးအငွေ့ humidifier အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ BPA အခမဲ့ & လှငျ Auto-ပယ်: Built-in...
ပူနွေးသောအလင်းနှင့်အတူမြူခိုး Humidifier ရနံ့ကုထုံရေနံ Cool အဆိုပါ Ultrasonic အနံ့ပျံ့နှင့်အတူသင့်အိမ်အလှဆင်ရန်။ မည်သည့်ပုံစံမျိုး fit မှတစ်ဦးအဖြူအရောင်အကြားတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါသို့မဟုတ်သင့်အရောင်တဲ့ pop ထင်းစပါးကိုထည့်သွင်းဖို့ရှာဖွေနေလျှင်ဧကန်အမှန်အဆိုပုံစံမျိုးအထိမြိန်ပါလိမ့်မယ်။...
ထုပ်ပိုး: အတွင်းစိတ်သေတ္တာ: * 120 120 * 245mm နဲ့ Master စက္ဏူထူ: * 375 495 * 510mm / 24pcs
အဘယ်သူမျှမဆူညံသံအနံ့မရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့ Air ကို Humidifier ၎င်း၏အကောင်းဆုံးမှာအပန်းဖြေတွေ့ကြုံခံစားရန်, ငါတို့အလွန်အမင်းထိထိရောက်ရောက်သင့်အိမ် & ရုံးခန်းတစ်လျှောက်လုံးအဆင်းလှသောရနံ့ diffuses ကြောင်းကိုသင်၏အကြိုက်ဆုံးမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများနှင့်အတူဒွန်တွဲနေအိမ်အမွှေးအကြိုင်ပျံ့သုံးပြီးအကြံပြုပါသည်။...
glaze Glass ကိုအနံ့မရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့ပြီးတော့ Humidifier Dituo အားဖြင့် 100 ml ကို Ultrasonic Humidifier နှင့် Night အလင်းနှင့်အတူတစ်ဦးပွော့အာကာသသို့မဆိုအခန်းတစ်ခန်းပါ။ ဤသည်အနံ့ပျံ့ရေတိုင်ကီကဘေးကင်းလုံခြုံမိသားစုတစ်စုလုံးကိုအသုံးပြုရန်အဘို့ဖြစ်စေခြင်း, PP ပစ္စည်းကိုဖန်ဆင်းသည်။ အိမ် humidifier...
5 နာရီကို run အကြီးစားချစ်စရာရနံ့ရေနံပျံ့ အဆိုပါ DITUO မရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့, မိနစ်ရနံ့၏ပြီးပြည့်စုံသောငွေပမာဏကိုကယ်တင်ကြောင်းအဓိက operated အမွှေးအကြိုင်ပျံ့နှင့်အတူသင့်အိမ်ထဲသို့အဆင်းလှသောအနံ့ပျံ့မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။ အထူးသ 100% မှာသဘာဝမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ Blend နဲ့တွဲသုံးဘို့လုပ်,...
ရနံ့အမွှေးအကြိုင်ပျံ့ခုနှစ်တွင်လျှပ်စစ် Mini ကို Plug မစိုက်, သင့်စိတ်ထဲ invigorating ရန်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုစင်ကြယ်စေတဦးတည်းကြော့နှင့်စတိုင်ပလပ်စတစ် diffuser.From ၌အကြှနျုပျတို့၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီအပေါငျးတို့သအကျိုးကျေးဇူးများနှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်လိုက်မယ်အဆိုပါခေတ်မီဆန်းပြား, ခံစားချက်-တိုးမြှင့် mini ကို humidifier...
တရုတ်နိုင်ငံ ဟိုတယ် Humidifier ပေးသွင်း
ဟိုတယ် Humidifier အထူးသဖြင့်ဆောင်းရာသီတွင်, သင့်ဟိုတယ်အခန်းလတ်ဆတ်တဲ့နွေဦးလေကြောင်း၏ခံစားချက်တတ်၏။
ဟိုတယ်ဧည့်သည်များအပူချိန်နှင့်စိုထိုင်းဆဟာသူတို့ရဲ့ဟိုတယ်အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာ, ရေကူးကန်ဧရိယာထဲမှာနှင့် spa ကျန်းမာနှင့်အဆင်ပြေအဆင့်မှာဖြစ်ကြောင်းမျှော်လင့်ထား။ အပူရာသီကာလအတွင်းဆွေမျိုးစိုထိုင်းဆ၏ညာဘက်အဆင့်သင့်ရဲ့ဧည့်သည်များ၏သုခချမ်းသာတိုးတက်ကောင်းမွန်။ 40 နှင့် 60% RH အများအကြားတစ်ဦးကဆွေမျိုးစိုထိုင်းဆဟာအဆင်ပြေမိုးလုံလေလုံရာသီဥတုကိုဆိုလိုသည်။
ဆောင်းတွင်းအပူရာသီအတွင်းဆွေမျိုးစိုထိုင်းဆကိုမကြာခဏ 30% အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖြစ်ပါတယ်။ အနိမ့်စိုထိုင်းဆအဆင့်ဆင့်သင့်ရဲ့ဧည့်သည်များ၏သုခချမ်းသာနှင့်ကျန်းမာရေးအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ humidification ခြင်းမရှိဘဲ, နာမကျန်းခြင်းနှင့်ရောဂါလွယ်ကူစွာထိခိုက်သိသိသာသာတိုးပွားလာနေပါတယ်။
အဆိုပါအကြောင်းပြချက်: စိုထိုင်းဆနိမ့်သည်လာသောအခါဗိုင်းရပ်စ်် Aerosol သိသိသာသာဂီယာ၏အန္တရာယ်ကိုတိုးမြှင့်, ပိုရှည်လေရှိနေဆဲနှင့်ခြောက်သွေ့သောနှာခေါင်း, လည်ချောင်းနှင့်အသားအရေကိုသဘာဝခုခံလျှော့ချသည် body`s ဆိုလို။
DITUO ရေနံ Humidifier လေ့မိုးလုံလေလုံစိုထိုင်းဆ, ဒါမှမဟုတ်လေထုထဲတွင်အစိုဓာတ်၏အဆင့်တိုးမြှင့်ဖို့အသုံးပြုကြသည်။ အဓိကအားမိုးလုံလေလုံအပူစနစ်များကြောင့်ဆောင်းရာသီလ, များတွင်အသုံးပြုခြင်းနှင့်အအေးအပူချိန်အနိမ့်စိုထိုင်းဆအဆင့်ကိုဦးတည်သွားစေ။ ဤအ drier လအတွင်းအခန်း humidifier များအသုံးပြုမှုများပြားကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများရှိနိုင်ပါသည်။ ဆောင်းတွင်းလအတွင်းခြောက်သွေ့တဲ့အသားအရေနှင့်အခန်း / အခြောက်အနှုတ်ခမ်းလျှော့ချအတွက် DITUO တပြင်လုံးကိုအိမ်သူအိမ်သား humidifier အကူအညီနဲ့။
ROOM တွင် Humidifier